Fedora 34 dia mikasa ny hanala ny fahasembanan'ny SELinux ary hifindra monina mankany amin'ny KDE avy any Wayland | Avy amin'ny Linux
Tsy mijanona ny asa ao anatin'ny Fedora Ary ny an'ny mpamorona no nanome ny zavatra noresahin'izy ireo indray ary amin'ity indray mitoraka ity dia tsy momba ny kinova Fedora 33 manaraka fa izany izy ireo koa dia efa mifantoka amin'ny Fedora 34.
Ary izany vao tsy ela akory izay amin'ny lisitra fandefasa-mailaka Resadresaka samihafa no nanomboka nipoitra momba ny fanovana isan-karazany natolotra tamin'ity kinova fizarana ity. Ny iray amin'ireo fanovana naroso dia ny fanesorana ny fanohanana amin'ny fampandehanana ny fotoana maharitra SELinux.
Raha ny fampiharana Fedora 34 dia faritana ny fanovana mba hanesorana ny fahafaha manafoana ny SELinux mandritra ny fotoana maharitra.
Na dia hitehirizana aza ny fahaizana mifamadika eo amin'ny fampiharana sy ny fomba mamela mandritra ny fanombohana. Aorian'ny fanombohana SELinux, Ny mpamily LSM dia hapetraka amin'ny maody famakiana fotsiny, izay manatsara ny fiarovana amin'ny fanafihana mikendry ny hanajanonana ny SELinux aorian'ny fitrandrahana ny fahalemena izay afaka manova ny atin'ny fitadidiana kernel.
Raha te-hiala amin'ny SELinux dia avereno indray ny rafitra miaraka amin'ilay masontsivana "selinux = 0" eo amin'ny tsipika baikon'ny kernel.
Ho fanampin'izay dia voalaza fa tsy hotohanana ny deactivation manova ny fikirakirana / etc / selinux / config (SELINUX = kilemaina). Talohan'izay, ny fanohanana ny fampidinana ny maodelin'ny SELinux dia nesorina tamin'ny kernel Linux 5.6.
Ny fanohanana ny fampandehanana ny fizotran'ny SELinux amin'ny alàlan'ny »/ etc / selinux / config» dia novolavolaina tany am-boalohany mba hanamorana ny fizarana Linux hanohanana ny maritrano izay sarotra ny manampy paramètre an'ny kernel.
Mampalahelo fa ny fanohanana ny famonoana ny fotoana maharitra dia midika fa tsy maintsy nanao varotra fiarovana izahay raha ny amin'ny vozona LSM kernel.
Ny fanamarihana ny faribolana LSM ho toy ny vakiteny dia manome tombony azo antoka ihany, fa midika izany fa tsy afaka hanafoana ny SELinux intsony isika izao.
Fiovana iray hafa efa voalaza ao anatin'ny lisitry ny mailaka ho an'ny Fedora 34, dia izany manolo-kevitra ny hanova ny fananganana default amin'ny birao KDE hampiasa Wayland amin'ny toerana misy anao, izay antenaina fa ny safidy X11 dia safidy iray.
Amin'izao fotoana izao, ny asan'ny KDE eo an-tampon'ny Wayland dia andrana, saingy ao amin'ny KDE Plasma 5.20 ity fomba fiasa ity dia hampiasaina miaraka amin'ny maody fandidiana eo ambonin'ny X11.
==== Vonona ve i Wayland? ====
Wayland dia efa nampiasaina ho an'ny Fedora Workstation hatramin'ny Fedora 25. Ary na dia somary tsy matotra aza izy tamin'ny voalohany, dia traikefa tena matanjaka amin'ny zavatra rehetra ihany.
Amin'ny lafiny KDE, ny asa matotra hanohanana an'i Wayland dia nanomboka fotoana fohy taorian'ny fivadihan'ny GNOME ho any Wayland. Tsy toy ny GNOME, ny KDE dia manana fitaovana midadasika kokoa, ary ela kokoa vao tonga amin'ny fanjakana azo ampiasaina. Miaraka amin'ny Plasma version 5.20, ny protokol Wayland ho an'ny
farany screencasting sy ny afovoany nopetahany takelaka dia tohana,
mamita ny laharam-pahamehana ilaina mba hifindra any Wayland
Ny fampidirana ny fivoriana Ny KDE 5.20 miorina amin'ny Wayland dia hiresaka momba ny olana amin'ny screencast sy ny tsindry afovoany. Ny fonosana kwin-wayland-nvidia dia hampiasaina hiasa rehefa mampiasa mpamily NVIDIA tompony. X11 fanampiana dia homena amin'ny alàlan'ny singa XWayland.
Toy ny adihevitra manohitra tazomy hatrany ny fivoriana misy anao X11, trano fivarotana X11 no voalaza, izay nanakana ny fivoarana tato anatin'ny taona vitsivitsy ary manamboatra ny bug sy ny fahalemena mampidi-doza ao anaty kaody fotsiny.
==== Ahoana ny NVIDIA? ====
Plasma, raha ny marina, ny "eny" dia mifanaraka amin'ny GPU NVIDIA miaraka amina mpamily Wayland tompony. Tsy maintsy halefa tanana izy io, izay hatolotry ny kwin-wayland-nvidia . Ka ny antenaina dia mandeha tsara daholo ny GPU lehibe rehetra.
Ny famindrana ny fananganana default any Wayland dia handrisika ny hetsika fampandrosoana bebe kokoa mifandraika amin'ny fanohanan'ny teknolojia sary vaovao ao amin'ny KDE, satria ny fampandrosoana dia hita taratra tamin'ny fotoana nilana azy tamin'ny famindrana ny fivoriana GNOME tao amin'ny Fedora 25 nankany Wayland.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Fedora 34 dia mikasa ny hanala ny fahasembanan'ny SELinux ary hifindra monina mankany amin'ny KDE avy any Wayland
Oscar Reyes Guerrero avy amin'i Elizondo dia hoy izy:
Fedora no fizarana Linux tsara indrindra manerantany….
Valiny tamin'i Oscar Reyes Guerrero avy any Elizondo
anonteision dia hoy izy:
Heveriko fa ho antsika izay manao fanadinana an-tserasera na mpamorona atiny, izay tsy maintsy mizara ny birao, dia hadisoana lehibe ny hamela ny ankamaroan'ny birao ho amin'ny anjaran'i Wayland.
Wayland dia tsy miasa amin'ny fisamborana efijery, birao lavitra, na fizarana fizarana birao. Isaky ny mampiasa Linux amin'ireo zavatra ireo isika, ny zavatra voalohany ataontsika aorian'ny fametrahana ny rafitra, dia tsy inona izany fa ny famonoana an'i Wayland.
Ho an'ireo izay manadihady an'i Cloudera dia nolazaiko azy ireo rehefa avy niatrika fanadinana vitsivitsy aho, satria tadidiko fa tsy maintsy nandeha haingana tany amin'ny solosaina hafa niaraka tamin'ny Windows aho satria ny ahy dia nampiasa ny Fedora 29 niaraka tamin'i Wayland ary tsy nanam-potoana tao anatin'ny fanadinana aho mba hikirakira azy. X11. Ho an'ny iray hafa dia hanandrana azy amin'ny Fedora aho, heveriko fa 33 na 34, fa amin'ny X11.
Manantena aho fa X11 azo ampiasaina farafaharatsiny, satria raha tsy izany dia mety ho very mpampiasa aho.